Al-Shabaab oo beegsanaysa diyaaradaha Kenya [Digiinta US] | KEYDMEDIA ENGLISH
Al-Shabaab oo beegsanaysa diyaaradaha Kenya [Digiinta US]
Mareykanka, wuxuu hoosta ka xariiqay, in Al-Shabaab ay heystaan ​​ama ay heli karaan hub kala duwan oo ay ku beegsadaan duullimaadyada, gaar ahaan, gantaalada iyo hubka lidka diyaaradaha, oo uu ku jiro, qoriga loo yaqaan Man-portable ee (MANPADS)
NAIROBI, Kenya - Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin cusub oo ku socota shirkadaha diyaaradaha rayidka ah ee ku duulaya hawada waddanka Kenya, si ay uga digtoonaadaan weerarrada suurtagalka ah ee Kooxda Al-Shabaab maleegayan.
War ka soo baxay, Hay’adda Duulista Hawada Maraykanka [FAA] ayaa lagu sheegay in Kooxda Al-Shabaab, ay weli haystaan ​​hub xooggan oo awood u leh in ay ku beegsadaan diyaaradaha joog hoose ku duulaya, gaar ahaan xilliyada duulista iyo degidda.
Digniinta Mareykanku, waxa ay sii kordhineysaa walaaca shirkadaha duulimadyada, oo horayba ay u soo wajahday khasaare maaliyadeed oo ballaaran oo ay sabab u tahay xannibaadaha safarka, si loo xakameeyo faafidda caabuqa daran ee Covid-19.
Warbixintu, waxa ay sheegtay in khatarta ugu badan ka jirto, marinka duulista ee isku xariiriya waqooyi-bari Kenya iyo Soomaaliya, halka aan laga saarin, marinnadda isaga kala goosha Nairobi iyo wadamada Bariga Fog, sida; Dubai (UAE), India iyo China.
Kooxda Al-Shabaab ayaa hore u muujisay awooddeeda iyo ujeedkeeda ku aaddan fulinta weerarrada ka dhanka ah Ciidamada Ammaanka Kenya, dadka rayidka ah, iyo danaha reer galbeedka ee waddankaas, gaar ahaan soohdinta bari ee Kenya la wadaagto Soomaaliya.
FAA, ayaa sanad ka hor, sheegtay in weerarkii 5-tii Janaayo, 2020, ay Al-Shabaab ku qaadeen, Camp Simba, oo ay deggan yihiin ciidamada Mareykanka, ay ku burburiyeen diyaarado badan, taas oo muujineysa beegsigooda ku aaddan waaxda duulista.
Mareykanka, wuxuu hoosta ka xariiqay, in Al-Shabaab ay heystaan ​​ama ay heli karaan hub kala duwan oo ay ku beegsadaan duullimaadyada, gaar ahaan, gantaalada iyo hubka lidka diyaaradaha, oo uu ku jiro, qoriga loo yaqaan Man-portable ee (MANPADS).
Gudaha Soomaaliya, Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraro ku qaaday diyaarado rayid ah, waxaana weerarradaas ka mid ahaa, duqeyn toos ah oo ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo qaar ka mid ah garoomo ku yaalla gobollada dalka.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, ayaa sanad ka hor amar ku bixiyay in ciidamada Mareykanka laga saaro Soomaaliya, kuwaas oo Pentagon-ku, xaqiijiyay in ay saldhigteen, dalal kale oo ka tirsan Bariga Afrika, si ay u sii wadaan duqeynta Al-Shabaab.
Faraca Al-qaacida ee Soomaaliya, Al-Shabaab, waxa ay hore, si cad u sheegtay in ay qaadayso weeraro ay uga aargoosanayso howlgallada ka dhanka ah ee Kenya ka wado gudaha Soomaaliya, kuwaas oo ay ka fuliyaan magaca howlgalka nabad-ilaalinta AMISOM.